Warshadda Farsamooyinka Farsamooyinka Saldhigga, Alaab-qeybiyeyaasha - Soo-saareyaasha Qalabka Saldhigga Shiinaha
PV48 waalka jabinta faakiyuumka
Noocyada sooca Nooca: Nukliyeerka faakiyuumka faakiyuunka jabiya Qaabka: ZKPHF41F-150 150Lb, ZKPHF21F-300 300Lb Ballaca Magac leh: DN 20-50 Badeecada waxaa loo isticmaalaa unugga AP1000 oo ah nuugista cadaadiska xun ee qalabka si looga hortago cadaadiskeeda hooseeya ee xad dhaafka ah inuu waxyeelleeyo qalabka. 1.With kala-goynta faakiyuukha nooca guga, faakiyuumka kala goynta faakuumka wuxuu leeyahay culeys sahlan oo joogto ah iyo hagaajin iyo rakibid haboon. Waalka waxaa loogu talagalay sida heerka cadaadiska iyo cadaadiska design ay ...
M60A waalka jabinta
Noocyada sooca Nooca: Nukliyeerka faaruqinta fayadhowrka Qaabka Moodalka: JNDX100-150P 150Lb Dhexdhexaad Magac leh: DN 100-250 Waxaa loo adeegsaday nidaamka iskuxiraha saldhigga tamarta nukliyeerka, waxay leedahay nuugid cadaadis taban, qiiqa wanaagsan ee qiiqa iyo howlaha kahortagga dheecaanka dareeraha .1. waalka jabinaya, waalka otomaatigga ah, uma baahna wadid dheeraad ah marka la hawlgalinayo. Xaaladda shaqada ee caadiga ah, xoogga wadajirka ah ee xilliga gu'ga iyo dhexdhexaadka ku shaqeeya qalabka wax lagu duubo ayaa cadaadiya waalka d ...
Heerkulka iyo cadaadiska yareya marinka cadaadiska hooseeya
Nooca Faahfaahinta Cadaadiska Yaraynta Mashiinka Mashiinka Y966Y-P5545V, Y966Y-P54.550V, Y966Y-P54.535V, Y966Y-P54.530V Wareegtada Magaceeda DN 200-450 Xaaladda shaqada ee heerkulka sare iyo cadaadiska weyn iyo kala duwanaanta heerkulka, waxay qaadataa tiro badan Gacmo-u-dheji yareynta cadaadiska iyo furitaanka furitaanka biiyaha guga ee buufinta biyaha iyo yareynta heerkulka si loo damaanad qaado heerkulka iyo saameynta yareynta cadaadiska. Faa'iidooyinka Valve waa qaab dhismeedka xagal ah ...
Heerkulka iyo waalka yaraynta cadaadiska marinka caabbinta cadaadiska sare
Nooca Faahfaahinta Cadaadiska Yaraynta Mashiinka Mashiinka Y966Y-P54.5140V, Y966Y-P55190V Ballaca Magaceeda DN 125-275 Waxay leedahay xaaladda shaqada ee heerkulka sare iyo cadaadiska weyn iyo kala duwanaanta heerkulka. Waxay qaadataa shaati-talaabo-badan oo loogu talagalay yareynta cadaadiska iyo ku-darsiga atomiga uumiga ah ee lagu buufiyo yareynta heerkulka si loo damaanad qaado saameynta heerkulka iyo yareynta cadaadiska. Faa'iidooyinka Falka waa qaab dhismeed xagal leh iyo jihada socodka dhexdhexaadka ah waa socodka ...
Cadaadiska yareynta cadaadiska ee hoos u dhigista saldhigga hawada kululeeyaha hore
Nooca Faahfaahinta Cadaadiska Yaraynta Mashiinka Moodhalka Y666Y-P55 806, Y666Y-1500LB Wareegtada Magaceeda DN 100 Dareeraha hoos u dhigaya qulqulka 600 ilaa 1,000MW kuleyliyaha horay u kululaa wuxuu qaadaa uumi diirimaad heerkul sarreeya sida isha hawo ka soo baxayo. Cadaadiska waxaa hoos u dhigay waalka koontaroolka ee saldhigga yareynta qoob-ka-ciyaarka waxaana la siiyaa qalabka wax lagu buufiyo sida ilaha hawada ka imanaya. Faa'iidooyinka Jirka waalka wuxuu qaataa alwaax been abuur ah ...
Cadaadiska yareynta cadaadiska ee saldhigga yareynta qiiqa
Nooca Faahfaahinta Cadaadiska Yaraynta Mashiinka Moodhalka Y669Y-P58280V, Y669Y-3000SPL Dhexdhexaad Dhex Dheer DN 80 Waxaa loo isticmaalaa nidaamka afuufidda danabka ee 600 ilaa 1,000MW kuleyliyaha unugyada kuleylka kuleylka ah. Faa'iidooyinka Jirka waalka wuxuu qaataa qaab-dhismeedka birta ah ee qalloocan oo leh awood sare iyo jihada socodka dhexdhexaadka ah waa nooca furitaanka socodka si loo buuxiyo shuruudaha xoogga ee heerkulka sare iyo cadaadiska. Waxay leedahay alxanka dabadiisa oo leh tuubbo. Waalka s ...
Biyaha buufinta nidaaminta marinka cadaadiska sare
Nooca Faahfaahinta Qawaaniinta Mashiinka Mashiinka T761Y-2500LB, T761Y-420 Ballaca Magaca Magaceedu yahay DN 100-150 Waxay maamushaa heerkulka yareynta socodka biyaha ee heerkulka iyo cadaadiska yareya cadaadiska sare ee marinka marawaxadaha uumiga. Iyada oo ay jirto xaalad shaqo oo ah cadaadis sare iyo farqiga cadaadiska weyn, waxay qaadataa habka ceejinta tallaabooyinka badan si looga hortago in ay dhacdo cavitation iyo uumi baxa flash. Faa'iidooyinka Falka waa qaab dhismeed xagal leh iyo jihada socodka dhexe waa ...
Nidaaminta waalka marin biyoodka ugu weyn
Nooca Faahfaahinta Qawaaniinta Nidaamka Mashiinka Mashiinka T668Y-4500LB, T668Y-500, T668Y-630 Dhexdhexaad Magac aan Magaceeda laheen DN 300-400 Waxaa loo isticmaalaa tuubbada marinka ugu weyn ee biyo-gelinta ee kuleyliyaha unugga 1,000MW ee heer sare ah (heer sare ah). Faa'iidooyinka Waalka waa qaab dhismeedka nooca toosan, jihada socodka dhexdhexaadku waa nooca socodka iyo dusha sare ee daalka kursiga waalka ayaa aad uga fog aagga uumi baxa tallaabada ugu dambeysa si loo damaanad qaado nolosha adeegga. Jirka waalka ...
Qalabka xakamaynta dareeraha degdegga ah ee kululeeyaha cadaadiska sarreeya
Nooca Faahfaahinta Nooca Gate Valve Model Z964Y Cadaadiska PN20-50MPa 1500LB-2500LB Ballaca Magaca Magaceedu yahay DN 300-500 Waxaa loo adeegsadaa furitaanka iyo xirida qalabka bamgareynta ama nidaamyada kale ee tuubada cadaadiska sare iyo kuwa dhexe ee 600 ilaa 1,000MW unug supercritical (ultra-supercritical) unit marawaxada uumiga. Faa'iidooyinka Fududeeyaha jirka iyo guntinku waxay qaataan qaabdhismeedka isku-xidhka dhejiska dhejiska, oo leh kala-bax ku habboon. Labada dhinacba waxay qaataan iskuxirka alxanka. Qalabka waalka ...
Waalka xakamaynta heerka biyaha ee haanta biyaha
Nooca Faahfaahinta Qawaaniinta Nidaamka Mashiinka Mashiinka T964Y-420Ⅰ, T964Y-500Ⅰ, T964Y-2500LB Dhexdhexaad Magac ah DN 250-300 Waxaa loo adeegsadaa nidaaminta heerka biyaha ee haanta biyaha ee 600 ilaa 1,000MW unug supercritical (ultra-supercritical) unug ah iyo gaarista ujeedada nidaaminta heerka biyaha ee haanta biyaha iyada oo loo marayo meelo kala duwan. Faa'iidooyinka Jirka waalka wuxuu qaataa qaabdhismeedka guud ee la been abuuray oo leh awood sarre leh, waalka wuxuu qaataa qaab dhismeedka nooca tuubbada leh socodka wanaagsan ...
Waalka ka shub nidaamka biyaha uumiga
Nooca Faahfaahinta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka PJ661Y-500 (I) V, PJ661Y-630 V, PJ661Y-P54290 (I) V, PJ661Y-P61310 V Magaca Wareega DN 40-100 Badeecada waxaa loo isticmaalaa nidaamka biyaha uumiga ee kululeeyaha ama matoorka uumiga qaybta kuleylka kuleylka (super-supercritical). Faa'iidooyinka Jirka waalka wuxuu qaataa qaab dhismeedka guud ee la been abuuray. Nooca wax lagu xidho ee qalabka waalka iyo guntinku wuxuu qaataa qaab dhismeedka is-daboolida cadaadiska. Dusha sare ee dahaadhka kursiga waalka ayaa leh xididdada 6 Dayaxgacmeed ...
Kumbiyuutar saddex-geesood ah oo loogu talagalay biyo bixinta kululeeyaha cadaadiska sarreeya
Nooca Faahfaahinta Nooca Saddex-Waal Qaabka Model F763Y-2500LB, F763Y-320, F763Y-420 Ballaca Magaca Magaceedu yahay DN 350-650 Inta lagu guda jiro hawlgalka caadiga ah ee kululeeyaha cadaadiska sarreeya ee 600 ilaa 1,000MW unug koronto kulul oo heer sare ah (heer sare ah) ee waalka seddex-geesoodka ah ee marinka kululeeyaha cadaadiska sareeyo ayaa la furay isbaaroodkuna waa xiran yahay. Biyo siinta kuleeliyaha waxay galeysaa kululeeyaha-cadaadiska sareeya wadada weyn kahor intaadan galin kuleeliyaha iyada oo loo marayo waalka seddex-geesoodka ah ee pre ...